भारतबाट फर्किएका धादिङका १६ जना गल्छी क्वारेन्टाईन भर्ना - Icatch Khabar
धादिङ। भारतवाट फर्किएका धादिङको गल्छी गाँउपालिका स्थित् गोगनपानीका १६ युवाहरुलाई गल्छी बैरेनीमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाईनमा राखिएको छ । भारतवाट फर्किएका मध्यको १ जनालाई ज्वरो आएपछि १६ जनालाईनै क्वारेन्टाईनमा राखिएको गल्छी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य प्रमुख राम प्रसाद ज्ञवालीले बताए । स्वास्थ्य प्रमुख ज्ञवालीका अनुसार उनिहरुलाई १४ दिन सम्म क्वारेन्टाईनमा राखेर स्वास्थ्य परिक्षण गरिने छ ।
यदी ज्वरो आएको ब्यक्ती तथा अन्य ब्यक्तीमा जटिल समस्या देखिए काठमाण्डौ लैजाने ब्यबस्था मिलाईएको समेत स्वास्थ्य प्रमुख ज्ञवालीले बताए । यता क्वारेन्टाईनमा राखिएकाहरुलाई खाना र खाजा लगायतकोे व्यवस्था गाउँपालिकालनैे गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णहरी श्रेष्ठले बताए ।
जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेसीमा खुल्ला मञ्चमै टेन्ट राखेर थप क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ । कोरोना भाइरसका शंकास्पद व्यक्तिलाई राख्नका लागी खुल्ला मञ्चमा ४० ओटा टेन्ट राखेर क्वारेन्टाइन बनाइएको हो । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको अगुवाइमा क्वारेन्टाइन तयार गरिएको धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रजिअ. अस्मान तामाङले बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस चितवनमा ७२ घण्टामा तयार भयो ५० शैयाको अस्पताल
१सय टेन्ट व्यवस्था गर्ने योजना रहेपनि त्यतिको संख्यामा टेन्ट पाउन नसक्दा ४० ओटा टेन्टमा क्वारेन्टाइन व्यवस्था मिलाइएको समेत प्रजिअ. तामाङले बताए । उपलव्ध भएको ६० ओटा टेन्ट मध्ये ४० ओटा टेन्ट खुल्ला मञ्चमा तयारी अबस्थामा राखिएको छ भने २० ओटा टेन्ट आपतकालिन अवस्थामा जहाँसुकै राख्न सकिनेगरी व्यवस्था मिलाइएको तामाङले जानकारी दिए ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको सूचना तत्काल प्राप्त गर्नेदेखि परीक्षण गर्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, आइसोलेसनमा राख्ने र औषधोपचार गर्नेसम्मका सबै व्यवस्थापन गरेको पनि प्रजिअ तामाङ बताए । सरकारको निर्णय अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको शंका लागेकाहरुलाई राख्न स्थानिय तहसंग छलफल गरी धादिङका विभिन्न स्थानमा क्वारेन्टाइन समेत बनाएको प्रजिअ तामाङ बताए ।
अघिल्लो लेखमाकोरोना प्रकोप : ४ लाख बढी स‌ंक्रमित, करिब १९ हजारको मृत्यु
अर्को लेखमालकडाउनले रोकिएका १० हजार विदेशी के गर्दैछन् ? सयौं पयर्टक हिमाली क्षेत्रमै अलपत्र
यो पनि पढ्नुहोस उदयपुरमा थप एक महिलामा देखियो कोरोना, संक्रमित संख्या ४३ पुग्यो